Wasiirka Arimaha Dibadda UK oo Galabta ka Dhoofay Muqdisho iyo Shariif Xasan oo Nairobi kaga Hormaray | Building Momentum
Wasiirka Arimaha Dibadda UK oo Galabta ka Dhoofay Muqdisho iyo Shariif Xasan oo Nairobi kaga Hormaray
Muqdisho (MomentMedia) Xoghayaha arimaha dibadda Wadanka Ingiriiska William Hague oo maanta socdaalkiisii ugu horeeyay ku yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa galabta ka duulay garoonka diyaaradaha Muqdisho.
William Hague waxaa socdaalkii uu ku yimid Muqdisho ku wehlinayey danjiraha cusub ee Dawladiisa u soo magacaabatay Soomaaliya Matt Baugh kaasoo maanta waraaqihiisa aqoonsi u gudbiyey madaxweynaha DKMG ah Shariif Sheekh Axmed.
Wafdigan dawlada Ingiriiska waxay saaka xarunta madaxtooyada kulan kula qaateen madaxweyne Shariif iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda KMG ah, kulankaasi oo albaabadu u xirnaayeen isla markaana aan la ogeyn waxalooga wada hadlay.
Kulanka madaxtooyada ka dhacay ayaa soo dhamaaday abaare 1:00 duhurnimo, waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyay wafdigu ay u soo dhaqaaqeen garoonka diyaaradaha Muqdisho hase yeeshee waxay ku leexdeen xerada Xalane oo saldhig u ah ciidamada AMISOM halkaasoo ay maanta ku wada qadeeyeen Willian Hague iyo wafdigii la socday iyo saraakiisha taliska AMISOM.
Kulankan qadada ah kama qeybgalin cid ka tirsan DKMG ah ee Soomaaliya.
Wafdiga Ingiriiska ayaa galabta dibuga duulay garoonka diyaaradaha Aden Cabdulle oo ay ku sugeysay diyaarad gaar ah oo ay wateen.
Dhanka kale ka hor intii aaney wafdigan ka duulin garoonka, waxaa isaguna garoonka ka dhoofay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay wehliyaan dhowr xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka KMG ah. Shariif Xasan ayaa la sheegay inuu Nairobi u duulay.
Ma cadda socdaalka Shariif Xasan ee Nairobi,hase yeeshee wuxuu ku soo beegmay iyadoo maanta ergeyga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya uu sheegay in khilaafka baarlamaanka uu caqabad ku noqday fulinta qorshaha habraaca marxalada kalaguurka “roadmap” kaasoo bishii Sebtembar 2011 uu Shariif Xasan ka mid ahaa dadkii wax ka saxiixay.
Shariif Xasan, ayaa sida la og yahay ku martiqaadan shirka London ee 23-kaFebraayo dawlada Ingiriiska u qabaneyso Soomaalida.